China Iswekile Juicer Machinery Production Line umzi-mveliso kunye nabavelisi |TSIBA
Umyinge weMicimbi yeSweba yeJuicer
Umatshini wokuvelisa iswekile/isityalo
304 Intsimbi engatyiwa
25 Iseti/iSeti ngoNyaka umatshini wokukhupha ijusi ozenzekelayo
Iphakheji yomthi ezinzileyo ikhusela umatshini kugwayimbo kunye nomonakalo.Ifilimu yeplastiki yamanxeba igcina umatshini ungafumi kunye nomhlwa.Ipakethe engafakwanga fumigation inceda ukucocwa kwezithethe ezigudileyo.Umatshini omkhulu wobungakanani uya kulungiswa kwisitya ngaphandle kwephakheji.Okanye ngokweemfuno zakho
Umatshini wokukhupha iJuicer ozenzekelayo
.1. Ukuvula i-enzyme kunye nokukhusela umbala wokunamathisela.
I-1.Adopt iteknoloji yaseNtaliyane, i-sub-head and double-headed, ukuzaliswa okuqhubekayo, ukunciphisa ukubuyisela;
I-2.Ukusebenzisa i-injection ye-steam ukwenza inzalo, ukuqinisekisa ukuzaliswa kwe-aseptic state, i-shelf life of product will twp iminyaka kwiqondo lokushisa;
3.Kwinkqubo yokuzalisa, usebenzisa imowudi yokuphakamisa i-turntable ukuphepha ungcoliseko lwesibini.
Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi:
Umntu woqhagamshelwano: Nina
Iwebhusayithi esemthethweni: www.jumpfruits.com
1.Lithini ixesha lewaranti yomatshini?
Unyaka omnye.Ngaphandle kweendawo zokunxiba, siya kubonelela ngenkonzo yokulungisa yasimahla kwiindawo ezonakeleyo ezibangelwa kukusebenza okuqhelekileyo ngaphakathi kwewaranti.Esi siqinisekiso asikuthinteli ukuguga nokukrala ngenxa yokuxhatshazwa, ukusetyenziswa kakubi, ingozi okanye ukulungiswa okanye ukulungiswa okungagunyaziswanga.Ukutshintshwa kuya kuthunyelwa kuwe emva kokuba ifoto okanye ubungqina bunikiwe.
2.Yintoni inkonzo onokuyinika ngaphambi kokuthengisa?
Okokuqala, sinokubonelela ngowona matshini ufanelekileyo ngokomthamo wakho.Okwesibini, Emva kokufumana ubungakanani beworkshop yakho, sinokuyila uyilo lomatshini wokusebenzela.Okwesithathu, sinokubonelela ngenkxaso yobugcisa ngaphambi nangemva kokuthengisa.
3.Ungaqinisekisa njani emva kwenkonzo yokuthengisa?
Sinokuthumela iinjineli ukuba zikhokele ukufakela, ukugunyaziswa, kunye noqeqesho ngokwesivumelwano senkonzo esisayinileyo.
Ngaphambili: Oomatshini bokuLungisa iJuice yePineapple engenaStainless
Okulandelayo: Intengiso eshushu i-100% ye-Watermelon ecocekileyo yokuLungisa iJuice Line
Jika iProjekthi ePhambili kumgca wokuVelisa uPowder weTomato
Gqibezela iJuice yeBlueberry ngokuzenzekela ...
Ukusebenza okuphezulu kwePrickly Pear Juice Production P...
Iseti epheleleyo yomatshini wokwenza iJusi yePapaya
Ibhotile yePlastiki yePapaya Juice ...